Tsy afaka manitatra ny fampirimana. Tsy azo nosokafana ny napetraky ny folder. Ny lesoka dia mety ho hita tao anaty rakitra.
Home Products DataNumen Exchange Recovery Ny lesoka dia mety ho hita tao anaty rakitra
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka "Mety ho hita tao anaty rakitra" Error
Rehefa mampiasa Microsoft Outlook hanokatra na hampifanaraka an fampirimana ivelan'ny seranana (.ost) fisie, hitanao izao hafatra diso izao:
Tsy afaka manitatra ny fampirimana. Tsy azo nosokafana ny andiana lahatahiry. Ny lesoka dia mety ho hita tao amin'ilay rakitra xxxx.ost. Atsaharo ny rindranasa alefa mailaka rehetra, ary avy eo ampiasao ny fitaovana fanamboarana Inbox.
aiza 'xxxx.ost'no anaran'ny fampirimana ivelan'ny seranana (.ost) fisie noforonin'i Outlook rehefa miasa miaraka amin'ny mailaka Exchange ivelan'ny seranana izy. Mety tsy hainao ilay rakitra satria noforonina tsy misy dikany izany.
Raha ny anao OST manjary simba na simba ny rakitra ary tsy azon'ny Microsoft Outlook zahana, dia ity lesoka ity no hitatitra azy.
Akatona ny Microsoft Outlook sy ireo rindranasa hafa mety hiditra amin'ny OST hametraka.
Find the OST rakitra izay mahatonga ny lesoka. Miorina amin'ny fampahalalana ao amin'ny hafatra diso, azonao atao ny mahita izany rakitra izany. Azonao atao koa ny mampiasa ny Mitady miasa ao amin'ny Windows hikarohana ny OST hametraka.
Avereno indray ireo angona ivelan'ny Internet ao amin'ny OST hametraka. The Exchange OST Ny rakitra dia misy tahiry ivelan'ny seranana, ao anatin'izany ny hafatra mailaka sy ny zavatra hafa rehetra, ao amin'ny boaty mailakanao Exchange izay tena manan-danja aminao. Mba hamerenana sy hanavotana ireo angona ireo dia tsy maintsy atao izany fampiasana DataNumen Exchange Recovery hijerena ny OST ataovy, avereno ny angon-drakitra ao anatiny, ary tahirizo ao anaty rakitra Outlook PST mba hahafahanao miditra amin'ireo hafatra sy zavatra rehetra miaraka amin'i Outlook mora sy mahomby.
Ovao ny anarana na hamafana ilay tany am-boalohany OST rakitra izay mahatonga ny olana.
Ampidiro ao amin'ny dingana 3 ny angona. Aorian'ny anao OST Voavaha ny olan'ny rakitra, tazomy ilay vaovao OST fisokafana ny boaty mailaka Exchange, ary sokafy ny rakitra PST novokarina tamin'ny dingana 3 miaraka amin'i Outlook. Satria mirakitra ny angon-drakitra voaverina rehetra ao amin'ny tany am-boalohany OST rakitra, azonao atao ny maka tahaka ireo zavatra ilaina amin'ny vaovao OST ataovy mifantina.